इकोस्फीयरको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा हरियो नवीकरणीय
अन्य लेखहरूमा हामीले कुरा गरेका छौं लिथोस्फीयर, जैव क्षेत्र, हाइड्रोसियर, वातावरण, आदि र यसका सबै सुविधाहरू। पृथ्वीको सबै क्षेत्र र प्रत्येकको कार्य राम्रोसँग परिभाषित गर्न वैज्ञानिक समुदायले सीमितताहरू स्थापना गर्दछ। धेरै अवसरहरूमा हामी इकोस्फीयरको बारेमा कुरा गर्छौं, यद्यपि यो अझै राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छैन र यसलाई समेट्न सक्षम छ भन्ने सन्दर्भमा सीमांकन गरिएको छैन।
पारिस्थितिक क्षेत्र परिभाषित गरिएको छ पृथ्वीको ग्लोबल इकोसिस्टम, जैव क्षेत्रको उपस्थित सबै जीवहरू र तिनीहरू र वातावरण बीच स्थापित छन् कि सम्बन्ध द्वारा गठन। के तपाई पर्यावरणको विशेषताहरु र महत्व को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
1 पारिस्थितिक परिभाषा यो के हो?
4 जैव क्षेत्र र पारिस्थितिक क्षेत्र बीच भिन्नता
5 पारिस्थितिक क्षेत्र बुझ्नका लागि नासा द्वारा बनाईएको विशेष प्रणाली
6 पारिस्थितिक क्षेत्रको सीमा नाघ्दै
पारिस्थितिक परिभाषा यो के हो?
हामी भन्न सक्छौं कि पारिस्थितिक क्षेत्र छ जैव क्षेत्रको योग र यसको सम्भावित अन्तरक्रिया वातावरणको साथ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, जीवशास्त्रले पृथ्वीका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू जीवित प्राणीहरूले बास गरेको समावेश गर्दछ, तर यसले वातावरणसँग यी जीवहरू बीचको अन्तरक्रियाको बारेमा चिन्तन गर्दैन। त्यो हो, जनावरहरू र बोटबिरुवाहरूको जनसंख्या, इकोसिस्टमको ट्राफिक चेन, प्रत्येक जीवको वातावरणमा अन्य प्रजातिहरूको बासस्थान, एबियोटिक र बायोटिक पार्टको सम्बन्ध आदि बीचको आनुवंशिक आदानप्रदान।
इकोस्फीयरको यो अवधारणा पृथ्वीको एकदम व्यापक ग्लोबल हो, किनकि यसको लागि धन्यवाद यसलाई हामी बुझ्न सक्ने एउटा सामान्य दृष्टिकोणबाट बुझ्न सम्भव छ। एक ग्रह इकोसिस्टम माथिको नाम, भू-क्षेत्र, जीवशास्त्र, हाइड्रोसियर र वातावरण द्वारा गठन। भन्नुको अर्थ यो हो कि पारिस्थितिक क्षेत्र सम्पूर्ण ग्रहको बाँकी इकोसिस्टम र उनीहरूको बिचको अन्तर्क्रियाको अध्ययन जस्तै हो।
किनकी इकोस्फीयरका आयामहरू विशाल छन्, यसलाई सानो आकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ यसको अध्ययनलाई सजिलो पार्न। हामीले यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ कि मानव जातिले पारिवारिक प्रणालीलाई विभाजन र वर्गीकृत गरी उनीहरूको कार्यप्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्न, तिनीहरूको संरक्षण गर्न र उनीहरूको शोषण गर्नका लागि, यो यथार्थ हो प्रकृति पूर्ण छ र ती सबै ईकोसिस्टमहरू बीच एक स्थायी अन्तरसम्बन्ध छ कि तथाकथित पारिस्थितिक क्षेत्र बनाउँछ।
हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं कि सम्पूर्ण ग्रहको ईकोसिस्टममा जीवित प्राणीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तरक्रिया गर्दछन्। उदाहरण को लागी, जब बोटहरु प्रकाश संश्लेषण, तिनीहरूले CO2 अवशोषित र अक्सिजन जारी कि अन्य जीवहरु को जीवन को लागी महत्वपूर्ण छ। अर्को उदाहरण जसमा पानीले हस्तक्षेप गर्ने अजैविक कारक जलविज्ञान चक्र हो। यस चक्रमा, पानी ग्रहको तहमा जीवनको लागि आवश्यक प्रक्रियामा सर्छ। पानीको यो आन्दोलन र इकोसिस्टममा निरन्तर योगदानको लागि धन्यवाद, लाखौं प्रजातिहरु हाम्रो ग्रह मा बस्न सक्छन्।
यी अन्तर्क्रियाहरू सबै जीवित प्राणीहरू, दुबै आपसमा र एबियोटिक कारकहरू (जस्तै पानी, माटो वा हावा) को साथ छन् कि पजलका सबै टुक्राहरू पृथ्वीमा सँगै रहन आवश्यक छ भनेर हामीलाई यसले बनाउन दिन्छ। यस कारणका लागि, यो आवश्यक छ कि हामीले ग्रहमा मानिसमा पार्ने प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ किनकि यसले गर्दा हुने कुनै पनि क्षतिले पारिस्थितिक क्षेत्रको बाँकी भागहरूमा प्रतिक्रियाहरू भोग्नुपर्नेछ।
जब हामी सबै जीवित जीवहरूलाई संदर्भ दिन्छौं हामीसँग जीवहरूको प्रकारहरूको एक महान विविधता छ। पहिले हामीसँग उत्पादन गर्ने जीवहरू छन्। यसलाई अटोट्रोफ्स भनिन्छ, कि तिनीहरू पानी, कार्बन डाइअक्साइड र खनिज लवणको माध्यमबाट आफ्नै खाना उत्पादन गर्न सक्षम छन्। आफ्नै खाना सिर्जना गर्न उनीहरूलाई सूर्यको किरणहरूको उर्जा चाहिन्छ। बोटहरू अटोट्रोफिक जीवहरू हुन्।
पछिल्लाहरूले उपभोग गर्ने जीवहरू हुन्, जसलाई हेटेरोट्रोफ्स भनिन्छ, जसले अन्य जीवित प्राणीहरूले उत्पादन गरेको जीवित जैविक पदार्थ खान्छन्। हेटेरोट्रोफ्समा हामी खपत गर्ने जीवहरूको धेरै प्रकारहरू फेला पार्न सक्छौं:
प्राथमिक उपभोक्ताहरू। तिनीहरू ती हुन् जसले केवल घाँस खान्छन्, जडिबुटीहरूलाई चिनिन्छ।
माध्यमिक उपभोक्ताहरू। तिनीहरू ती शिकारी जनावरहरू हुन् जसले जडिबुटीहरूले मासु खान्छन्।
तृतीयक उपभोक्ताहरू। तिनीहरूले ती मासुहरूलाई खुवाउँदछन् जुन अरू मांसाहारी जनावरहरूमा खान्छन्।
विघटनकर्ताहरू। तिनीहरू ती हेटेरोट्रोफिक जीवहरू हुन् जसले मृत जैविक पदार्थहरूमा भोजन खान्छन् जुन अन्य जीवित प्राणीहरूको अवशेषबाट परिणाम हुन्छ।
जैव क्षेत्र र पारिस्थितिक क्षेत्र बीच भिन्नता
एकातिर, जैविक क्षेत्र, जहाँ यी जीवहरू अवस्थित छन्, महासागरको तल्लोदेखि माथिल्लो पहाडको टुप्पोसम्म फैलिन्छ जुन वायुमण्डलको एक भाग, ट्रोपोस्फियर, हाइड्रोसियर र भूगोलको एक भाग सतह समेट्छ। , त्यो हो, जैव क्षेत्र, जुन यो फेर्दछ, यो पृथ्वीको त्यो क्षेत्र हो जहाँ जीवन पाइन्छ।
तथापि, अर्कोतर्फ, पारिस्थितिकीय क्षेत्र मात्र होइन जहाँ जीवन पाइन्छ र फैलिन्छ, तर यसले यी जीवित प्राणीहरू बीचको सबै सम्बन्धहरूको अध्ययन गर्दछ। जीवित प्राणी र वातावरण बीच वस्तु र उर्जाको आदानप्रदान काफी जटिल छ। इकोसिस्टममा सामंजस्य हुन र सबै प्रजातिहरू एकै साथ मिलेर बस्न सक्छन्, त्यहाँ आबादीलाई समर्थन गर्न प्राकृतिक संसाधनहरू हुनुपर्दछ, सिकारीहरू जसले प्रत्येक प्रजातिको व्यक्तिको स control्ख्या नियन्त्रण गर्दछ, अवसरवादी जीवहरू, परजीवी र होस्टहरू बीच सन्तुलन, सहजीवी सम्बन्धहरू, आदि। ।
जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनहरू र हुने मौसमविज्ञानी परिस्थितिहरूको आधारमा प्रत्येक इकोसिस्टमसँग एक पारिस्थितिक सन्तुलन छ। यस पारिस्थितिक सन्तुलन अध्ययन गर्न र बुझ्नको लागि धेरै गाह्रो भएको छ, किनकि यस चरम सन्तुलनमा कार्य गर्ने धेरै चरहरू छन्। मौसमविज्ञानी परिस्थितिहरू ती हुन् जसले इकोसिस्टममा उपलब्ध पानीको मात्रा निर्धारण गर्छन्, पानीको मात्रा, फलस्वरूप, बोटबिरुवाको विकासलाई सक्षम पार्दछ, जसले फलस्वरूप शाकाहारी वनस्पतिहरूको आबादीलाई समर्थन गर्दछ, जुन मासुलाई मासु पालन गर्ने काम गर्दछु र ती अवशेषहरू विघटनकर्ताहरू र स्क्याभेन्जरहरूमा जान्छन्।
यो सम्पूर्ण फूड चेन प्रत्येक स्थानमा र प्रत्येक क्षणमा अवस्थित सर्तहरूसँग "बाँधिएको छ", त्यसैले यदि त्यहाँ एक कारक छ जुन सबै चलहरू असंतुलित गर्दछ, इकोसिस्टमले अस्थिरता ट्रिगर गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, कि कारक कि बाकी को असंतुलित मानिस को कार्य हुन सक्छ। दुवै जीव र जैविक कारकमा वातावरणमा मानिसको निरन्तर प्रभावले इकोसिस्टमको सन्तुलनलाई परिवर्तन गरिरहेको छ, यसले गर्दा धेरै प्रजातिहरूको बाँच्न गाह्रो पर्दछ र अरु धेरैको लोप हुन्छ।
पारिस्थितिक क्षेत्र बुझ्नका लागि नासा द्वारा बनाईएको विशेष प्रणाली
इकोसिस्टममा अवस्थित पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बुझ्नका लागि, नासाले एक प्रयोग सिर्जना गर्‍यो। यो हर्मेटिक रूपमा बन्द गिलास अण्डा हो, जसमा शैवाल, ब्याक्टेरिया र झींगा, कुनै न कुनै रूपमा, एक वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध संसार, जुन, सम्बन्धित हेरचाहको साथ, चार र years बर्ष बीच बाँच्न सक्छ, यद्यपि जीवन १ years बर्षसम्म चलेको घटनाहरू भए।
यो विशेष प्रणाली प्रणालीलाई नियन्त्रणमा राख्ने सन्तुलनलाई बुझ्नको लागि सिर्जना गरिएको हो र यसले सद्भाव बनाउँछ कि सबै प्रजातिहरू यसमा बस्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको आपूर्ति गर्दछन् जुन उनीहरूलाई हटाउँदैनन्।
पारिस्थितिक सन्तुलन बुझ्ने यस धारणाको साथसाथै, यो प्रणाली भविष्यमा पृथ्वीदेखि टाढाका ग्रहहरूमा पूर्ण इकोसिस्टमहरू लैजानका विकल्पहरू खोज्नको लागि सिर्जना गरिएको थियो। मंगल जस्तो
समुद्री पानी, समुद्री पानी, शैवाल, ब्याक्टेरिया, झिंगा, बजरी अण्डामा परिणत भएको थियो। जैविक गतिविधि पृथक्करणमा हुन्छ किनकि अण्डो बन्द छ। यसले केवल जैविक चक्र कायम राख्न बाहिरबाट प्रकाश प्राप्त गर्दछ।
यस परियोजनाको साथ तपाईसँग एउटा सुविधा भएको विचार हुन सक्छ जसले खाना, पानी र हावाको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ ताकि अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अर्को ग्रहमा राम्रोसँग पुग्न सकून्। त्यसोभए यस अर्थमा नासाले इकोस्फीयरलाई सानो ग्रह पृथ्वी र झिंगे मान्ने मान्छे मान्दछ।
पारिस्थितिक क्षेत्रको सीमा नाघ्दै
यस प्रयोगको लागि धन्यबाद, यो इकोसिस्टमको सन्तुलन राम्रोसँग बुझ्न सम्भव छ र जबसम्म सीमालाई सम्मान गरिन्छ, सद्भाव हुन सक्छ र अन्तरिक्षले समर्थन गर्ने सबै प्रजातिहरू बाँच्न सक्षम हुनेछन्। यसले हामीलाई यो महसुस गर्न मद्दत गर्नुपर्दछ, हाम्रो ग्रहमा, इकोसिस्टमको सीमा नाघेको छ, किनकि पारिस्थितिक भ्यारीएबलहरू पार भैरहेका छन्।
इकोस्फीयरमा थोरै सजिलो छ कि यी सीमाहरूको बुझ्नको लागि, हामीले ध्यानमा राख्नु पर्छ कि इकोसिस्टममा सीमित स्रोतहरू र सीमित स्थान छ। यदि हामीले त्यस स्थानमा धेरै प्रजातिहरू परिचय गर्‍यौं भने तिनीहरू संसाधन र क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रजातिहरूले तिनीहरूको जनसंख्या र व्यक्तिको संख्या पुनरुत्पादित र बढाउँछन्, त्यसैले स्रोत र जग्गाको माग बढ्नेछ। यदि प्राथमिक जीवहरू र प्राथमिक उपभोक्ताहरू बढ्छन् भने, सिकारीहरू पनि बढ्नेछन्।
निरन्तर बृद्धिको यो अवस्था समयमै अनिश्चितकालिन जारी रहन सक्दैन, स्रोतहरू असीमित छैनन्। जब प्रजातिहरू पुन: उत्पन्न र बन्दरगाह संसाधनहरू इकोसिस्टमको क्षमता भन्दा बढि हुन्छन्, प्रजातिहरूले फेरि सन्तुलन नपुगुन्जेल तिनीहरूको जनसंख्या घट्न थाल्छ।
मानव जातिको साथ यो भइरहेको छ। हामी बढ्दो र रोक्न नसक्ने दरमा बढ्दै छौं र हामी प्राकृतिक स्रोतहरू त्यस्तो दरमा खपत गर्दैछौं जहाँ यस ग्रहको पुन: निर्माण गर्न समय हुँदैन। यस ग्रहको इकोलोजिकल सन्तुलन लामो समयदेखि मानिसहरूले पार गरिसकेका छन र हामी मात्र यसलाई फेरि राम्रो व्यवस्था र सबै स्रोतहरूको प्रयोगको साथ गर्न सक्दछौं।
हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि हामीसँग केवल एउटा ग्रहहरू छन् र यो हामीमा रहिरहन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » पारिस्थितिक क्षेत्र
बालुवा अत्यधिक शोषणले वातावरणीय र राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न गर्दछ
नयाँ ब्लेडलेस हावा टर्बाइनहरू